राजनीतिमा केटाकेटी ! | PaniPhoto
राजनीतिमा केटाकेटी !	paniphoto / June 15, 2012 /3Comments आज माओवादीको जनप्रदर्शन हेर्न खुलामञ्च जाँदै थिए । मेरो अघी अघी यसो हेर्छु झन्डै भुई नछोडेको सानो फुच्चे (कार्यकर्ता) झन्डा बोकेर सडकपेटीमा एक्लै हिड्दै थिए । फोटो खिचेँ । दलहरुका राजनीतिक क्रियाकलाप केटाकेटीको प्रयोग देखिनु हाम्रो लागि सामान्य भइसक्यो । अझ बन्दमा त केटाकेटीलाई चरम प्रयोग गरिन्छ । यसरी साना मसिना फाइदाका लागि केटाकेटीलाई प्रयोग गर्नु कदापि राम्रो होइन । यस्तो देखिरहदा मनमा नराम्रो चस्का पस्छ । यसैले पहिले पहिले खिचेका केही तस्विरहरु पनि यो ब्लगमा राखेको छु । आशा छ, सानै भएपनि यस्ता कदमको बिरोधमा स्वर उठ्नेछ, कम्तिमा यही ब्लगमा भएपनि । हुन त यी पनि नागरिक हुन् । यीनीहरुको पनि अधिकारको रक्षा हुनुपर्छ, त्यसका लागि आवाज उठ्नु पर्छ । तर पनि कुनै पनि शर्तमा यीनीहरुलाई राजनीतिमा प्रयोग गरिनु हुदैन । झन्डा दिनु भन्दा झन्डा बनाउँने रकमले कलम कापी पो किनिदिने हो कि ।
यीनलाई जातीय अधिकार खोज्न हिडाउँनु भन्दा नाकको सिंगान पुछ्न सिकाए केही हुन्थ्यो कि । यो तस्विर नेपालडायरी डट वर्डप्रेस डट कमबाट साभार गरिएको हो ।
यो माथिको फोटो मैले केही समय अगाडी मधेसी मोर्चाले गरेको शक्तिप्रदर्शनको समयको हो । तर यो खुलामञ्च वा सभास्थलबाट लिएको हैन । यो फोटो शान्तिनगरको एउटा पेट्रोलपम्पमा लिएको हुँ । कार्यकर्तालाई पेट्रोल बाँडिरहेको पम्पमा आफैले झन्डावाल बाइक लिएर आएका थिए यी बालक । कति बर्षका भयौ भनेर मैले सोध्दा १६/१८ को भनि गफ दिए । सित्तैमा पाइने पेट्रोलको लाइनमा बसेका उनलाई आफैले लिएर हिडेको झन्डा कस्को हो भन्ने चै थाहा रहेनछ । झन्डा बोके जे गरे पनि हुने मनस्थितीमा हुर्कने यी केटाकेटी अलिक ठुला भएपछि के गर्लान् । उनलाई मैले अरु केही प्रश्नहरु गरेको थिएँ । भिडियोमा हेर्न तल क्लिक गर्नुहोस्
Tags: राजनीतिमा केटाकेटी ! / Posted in: खुल्ला बहस
कर्म अधिकारी says: June 15, 2012 at 6:57 pm / Reply
नैतिकता विहिन भएर राजनीतिक पार्टीहरु केटाकेटीहरुलाई यसरी प्रयोग गर्नु निन्दनिय छ । यसमा कम्यनिष्टहरु निकै अगाडी छन् । सबैभन्दा पहिलेको तस्विर हेरेरै थाहा हुन्छ नि ।
paniphoto says: June 15, 2012 at 7:02 pm / Reply
माथिको पहिलो तस्विर हेरेको भरमा कम्युनिष्टहरुलाई आरोप लगाउँनु भएछ । कसलाई आरोप लगाउँने तपाईको कुरा भयो । तर मैले माथिको तस्विर कम्युनिष्टहरुलाई आरोप लगाउँनका लागि खिचेको भने हैन । आज सायद कांग्रेस वा अरु कसैको सभा भएको भए र ति बालकले त्यो झन्डा भेटेका भएपनि म फोटो खिच्ने थिएँ । र बिरोध गर्ने थिएँ ।
Rishi Pathak Gauriprem says: June 15, 2012 at 10:19 pm / Reply
धन्यवाद गणेशजी खुसी लाग्छ तपाईको ब्लगबाट खबर भित्रको खबरहरु थाहा पाउँछु । धेरै राम्रो छ अनि आज भोली पहिलाको जस्तो कथाहरु प्रकाशित हुदैनन किन होला ?